Ihe ị ga-ahụ na Navaluenga: njem nlegharị anya ime obodo na ihe nketa oge ochie | Akụkọ njem
Ihe ị ga-ahụ na Navaluenga bụ ajụjụ a na-azaghị n'ọtụtụ webụsaịtị njem. N'ihi na nke a obere obodo n'ógbè nke Avila ọ bụ n'èzí ụzọ njem nlegharị anya nke nnukwu ndị ọrụ.
Otú ọ dị, Navaluenga Ọ bụ ihe ịtụnanya na ị ga-amarịrị. Obere obodo a, nke dị naanị otu narị kilomita site na Madrid, nwere ihe nketa dị egwu na-adọrọ mmasị. Ma, n'elu ihe niile, a ùgwù eke gburugburu ebe obibi na-atọ ụtọ gastronomy. Ọ bụrụ na a kpalitere mmasị gị gbasara ihe ị ga-ahụ na Navaluenga, anyị ga-agwa gị gbasara ihe a niile.
1 Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Navaluenga?
1.1 Obodo Sierra de Gredos
1.2 Ihe nketa okpukpere chi bara ụba
1.3 Akwa mmiri Romanesque
1.4 Necropolis dị elu ma ọ bụ Las Cabezuelas: ihe omume ndị ọzọ a ga-eme na Navaluenga
1.5 Gburugburu Navaluenga
1.6 Ihe omimi nke Navaluenga
1.7 Kedu ka esi esi na Navaluenga?
Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Navaluenga?
Na sonso puku abụọ bi na saa site na Osimiri Alberche, a na-ewere obodo a nke Avila ka ọnụ ụzọ ámá nke Sierra de Gredos. N'ezie, ọ dị n'ebe dị elu nke mita 1700 na ọtụtụ ụzọ njem na ugwu na-amalite site na ya. Ya mere, anyị ga-amalite ịgwa gị ihe ị ga-ahụ na Navaluenga maka ọmarịcha gburugburu ebe obibi ya.
Obodo Sierra de Gredos
Burguillo reservoir na nnukwu ụlọ
Dị ka anyị gwara gị, ụzọ ugwu dị iche iche na-amalite site na Navaluenga na-eduga gị n'ebe a na-apụghị imeri emeri. N'ime ha Peñalar gorge, nke nwere ihe karịrị otu puku mita n'ịdị elu. Ọ bụ mpaghara nke laurel pine na oji udele. Ke adianade do, o nwere mmiri nke Mmiri mmiri Burguillo. Site n'ụzọ, anyị ga-agwa gị na n'ime apiti a, e nwere agwaetiti nke nwere nnukwu ụlọ mara mma nke na-echetara ndị dị na akụkọ ọdịnala. Ị nwere ike ịnọ na ya ma nwee mmetụta dị ka agwa oge ochie.
Ọ dịghị obere ikpọ bụ Ọdọ mmiri nke Lanchamala na Barranco Cambronal. Nke mbụ, nke ugwu gbara ya gburugburu, nwere ọnụ ọgụgụ kasị elu nke La Rubiera, nke, na puku mita abụọ n'ịdị elu, bụ ihe kachasị elu na mpaghara ahụ.
Ihe ịtụnanya ọzọ nke odida obodo Navaluenga bụ Valle de Iruelas Natural Reserve, nke nwere nnukwu uru gburugburu ebe obibi. Ọ bụkwa ebe a na-ekiri udele ojii, kamakwa maka ụdị ndị ọzọ dị ka ugo eze ukwu ma ọ bụ egbe. Ihe a niile na-echefughị ​​oke ọhịa chestnut ya ma ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ. N'ime nke a, mgbada, anụ ọhịa ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa.
N'ikpeazụ, osimiri Alberche na-emepụta ọdọ mmiri dị iche iche nke ị nwere ike ịsa ahụ mara mma. Na n'ime ala ahịhịa nke Trampalones ị ga-ahụ ọhịa pine na ísì ụtọ na-enweghị atụ. Ị nwere ike iru ya ma n'ụkwụ ma n'ịnyịnya igwe, ebe ọ nwere ụzọ nke ya.
N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike iju gị anya ịmata na obodo dị obere ka Navaluenga nwere ebe egwuregwu gọọlfụ nwere hectare iri atọ nke ahịhịa, ọdọ mmiri na ngụkọta nke oghere iri atọ.
Ihe nketa okpukpere chi bara ụba
Okporo ụzọ dị na Navaluenga
Ọ bụghị ihe niile bụ ọdịdị na Navaluenga. O nwekwara ihe nketa okpukpe na-adọrọ mmasị. Ọnụ ọgụgụ kacha elu ya bụ Parish Church nke Our Lady of Villares, nke e wuru n’agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. N'elu facade ya, e nwere oghere carpal anọ nke ogidi isii na-akwado, ebe ị ga-eleba anya n'ụdị baptizim Romanesque.
Ọzọkwa, na-esote ụlọ nsọ a, ị pụrụ ịhụ Cross nke Cerrillo de San Marcos, nke nwere ihe odide na script Gothic. Ihe owuwu okpukpe nke obodo ahụ bụkwa ụlọ nke Nuestra Señora de la Merced, nke malitere na narị afọ nke iri na asaa, nke San Isidro, nke a na-esi n'ụgbọ ịnyịnya na-abanye, na nke Virgen del Espino, nke dị mita 1800. nke elu na ebe a na-eme njem njem kwa afọ.
Akwa mmiri Romanesque
Àkwà mmiri Romanesque nke Navaluenga
Ihe nnọchianya ọzọ nke Navaluenga bụ àkwà mmiri Romanesque, nke echekwara nke ọma. Ewubere ya na narị afọ nke XNUMX iji mee ka anụ ụlọ gafere n'ugwu. Ha nnukwu mmiri mmiri abụọ. Dị ka ị maara, nke a bụ aha e nyere iberibe ala ala mmiri ndị a na-eme ka ụgbọ mmiri na-egbutu mmiri.
Necropolis dị elu ma ọ bụ Las Cabezuelas: ihe omume ndị ọzọ a ga-eme na Navaluenga
Nnọọ nso Navaluenga bụ nnukwu necropolis ochie nke Ngwa ngwa. Mkpakọrịta n'etiti narị afọ nke XNUMXth na XNUMXth, o nwere opekata mpe ili iri na ise e gwupụtara n'ụgbọ mmiri granite. Ụdị nkwụnye ego ndị a bụ ihe a na-ahụkarị n'ugwu Avila ma bụrụ ebe ili ozu nke obere obodo ndị akụ na ụba ha dabere na nrigbu anụ ụlọ.
N'aka nke ọzọ, ewezuga nnukwu ihe nketa na gburugburu ebe obibi nke obodo Avila, e nwere ogige ntụrụndụ nke. Ndị Cabezuela. Ma ị ka nwere ike ịnụ ụtọ ya. Ọ nwere ahịrị zip dị iche iche na ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ maka ma ụmụaka ma ndị okenye. Na ihe a niile n'etiti ọdịdị dị egwu.
Gburugburu obodo a mara mma nke Ávila nwekwara ebe mmasị anyị na-akwado ka ị gaa. Ọ bụ ikpe nke Burgohondo abbey. Ndị bi na ya bụ isi obodo kansụl nke Navaluenga so na ya n'oge ochie.
Ka ọ na-erule njedebe nke narị afọ nke XNUMX, e nyefere mpaghara ahụ n'aka Iwu nke ndị na-agwọ ọrịa nke Saint John nke Jerusalem iji chebe ya pụọ ​​​​na mwakpo ndị Alakụba. N'ihi na nke a, ya òtù tọrọ ntọala a convent n'okpuru oku nke St. Augustine, ọ bụ ezie na mgbe e mesịrị, ndị Dominican lekọtara ya.
N'oge ya, ọ bụ nnukwu ebe obibi ndị mọnk. Eziokwu ahụ bụ́ na o nwetara ihe ùgwù site n’aka ndị eze ukwu dị ka Alfonso X onye maara ihe, ndị eze Katọlik ma ọ bụ Felipe nke Abụọ nakwa site n’aka ndị poopu dị ka Alexander nke Isii ma ọ bụ Leo X na-enye anyị echiche banyere nke a.
Ugbu a, ọ bụ naanị ụlọ ụka ya ka dị na abbey. Ọ bụ Romanesque na atụmatụ, n'agbanyeghị na ọ nwere ọmarịcha ụlọ mkpuchi Mudejar. Ọzọkwa, n'ebe ịchụàjà ya, ị nwere ike ịhụ foduru ihe osise mgbidi na narị afọ nke XNUMX.
Obodo ọzọ mara mma dị nso na Navaluenga bụ obodo nta Igbe, nke na-agbatị n'etiti ọhịa chestnut. Ọ bụrụ na ị gaa na ya n'oge mgbụsị akwụkwọ, na agba nke oge, ị ga-ahụ ọdịdị dị egwu.
Ihe dị mkpa bụ mpaghara nke Barraco, naanị nkeji iri abụọ ji ụgbọ ala si Navaluenga. Ebe ugwu Cebrera chekwara, ọ na-enye gị ihe ncheta na ebe mmasị karịa. Gị Nuclei ochie nke Avellaneda, Navalcarros ma ọ bụ Navalmulo, taa enweghị onye bi.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na El Barraco Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX, àkwà mmiri Rome, ebe obibi nke La Piedad, Ụlọ Nzukọ Alaeze (nke sitere na narị afọ nke XNUMX) na ụlọ elu Gaznata, nke e depụtara na narị afọ nke XNUMX.
Ọzọkwa, n'etiti gburugburu ịhụ na Navaluenga, ọ mara mma nke ukwuu Villanueva nke Avila. Obodo nta a pụtara maka ụlọ ọdịnala nke agbataobi dịka Las Tórdigas na Roblellano, nke mebere ntọala ethnographic na-adọrọ mmasị. Ma n'ikpeazụ, anyị ga-agwa gị banyere Navarrevisca, ebe ị nwere ike ịga na chọọchị San Sebastián, hermitages nke Humilladero na San Antonio, yana dị iche iche àkwà mmiri.
Mana, n'etiti ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Navaluenga, anyị ga-agwakwa gị gbasara gastronomy ya. Ị nweghị ike ịhapụ obodo a mara mma nke Avila ma ọ bụrụ na ị na-anwale efere ndị na-atọ ụtọ.
Ihe omimi nke Navaluenga
Ngwongwo T-ọkpụkpụ si Ávila
Obodo a abụrụla ebe ndị ọzụzụ atụrụ kemgbe ọtụtụ narị afọ. N'ihi nke a, nri ya siri ike na caloric, mana ọ na-atọkwa ụtọ. Ndị na-eri nri agaghị ahụ ọtụtụ efere iji nọgide na-enwe ya. Ọ bụ gastronomy siri ike, mana ọ dị mma ịchaji batrị gị mgbe ị gachara na Sierra de Gredos.
N'ime efere ndị ị nwere ike isi ísì bụ ofe galik, nke ahụ ga-eme ka ị kpoo ọkụ ma ọ bụ ụfọdụ nduku tumbled na torreznos na-atọ ụtọ. Ọ dịghị obere ike bụ ndị agwa mpaghara na chorizo ​​​​.
Mana, ịbụ obodo dị na Avila, ị gaghị atụfu ya steak si Ávila ma ọ bụ nwa ewu n'ụdị Navaluenga ma ọ bụ na stew. Ị nwekwara ike ịhọrọ ezi na-aṅụ ara ma ọ bụ ezì na-aṅụ ara , ọkụkọ na pepitoria ma ọ bụ aka ezì na oke bekee na-achụ nta.
N'otu aka ahụ, ọ na-ahụkarị nke mpaghara hornazo, nke bụ ụdị achịcha jupụtara na chorizo ​​​​, anụ ezi na akwa. Na nke bọọlụ chicarrones, nke a na-eji abụba anụ ezi mee, ma nwekwara sugar na anise.
Nke a na-eduga anyị ịgwa gị gbasara sweets a na-ahụkarị na Navaluenga. Banyere ha, anyị na-adụ ọdụ ka ị na-agbalị fritters, na Yolks Santa Teresa (nke dị na mpaghara Ávila dum) ma ọ bụ tocinillo de cielo. N'ikpeazụ, a ma ama n'obodo Avila piich, nke ị nwere ike ịtọ ụtọ, dịka ọmụmaatụ, na sirop.
Kedu ka esi esi na Navaluenga?
Ụzọ ahụ ka ọ na-agafe El Barraco
Obodo dị na ndịda nke Avila na northwest nke Madrid. Ị nwere ọrụ nke ụgbọ ala site n'obodo abụọ ahụ. Banyere nke mbụ, njem ahụ na-ewe ihe dị ka nkeji iri ise iji rute, ebe, n'ihe gbasara Madrid, njem ahụ na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-aga n'ụgbọala nke gị, a na-ebelata oge nke ukwuu. Site na Ávila, ị ga-aga okporo ụzọ 403, nke na-agafekwa Barraco. Kpọmkwem n'obodo a, ị kwesịrị ị na-ahapụ na ntụziaka nke San Juan de la Nava wee tụgharịa na ndịda iji ruo Navaluenga.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-aga obodo na ụgbọ ala gị si Madrid, ị ga-ahapụ na ntụziaka nke Pozuelo y San Martin de Valdeiglesias ka wee were ntụziaka gaa Na-ama jijiji. Tupu ị rute El Barraco, ị ga-atụgharịrịrị n'aka ekpe Ọnụ ụzọ Burguillo na, mgbe ọ gafechara Nkuku, ị ga-erute Navaluenga.
Na mmechi, anyị gosiri gị ihe ị ga-ahụ na Navaluenga. Anyị agwala gị banyere ọmarịcha gburugburu ebe obibi nke gbara obodo Avila gburugburu yana otu ị ga-esi chaji batrị gị site na ịnụ ụtọ ọmarịcha gastronomy nke mpaghara ahụ. Ị nwekwara ebe egwuregwu gọlfụ, ma ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu ahụ. Ugbu a, naanị ị ga-ekpebi ịmara ọmarịcha obodo a dị na Siera de Gredos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihe ị ga-ahụ na Navaluenga